Ciidamada Booliska oo masaafuriyay nin qaba Cudurka Juudaanka & Nin u dhintay bahal qaniinay | Somaliland.Org
Ciidamada Booliska oo masaafuriyay nin qaba Cudurka Juudaanka & Nin u dhintay bahal qaniinay
October 27, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Ciidamada Booliska Somaliland ayaa xalay dalka Itoobiya u masaafuriyay Nin qaba Cudurka Juudaanka oo Hargeysa lagu qabtay.
Ninkan oo Jidhkiisa dhaawacyada Cudurku ka muuqdeen, isla markaana Xannuunkani dheecaan ku keenay Jidhkiisa, ayaa Ciidamada Boolisku sheegeen in xalay la masaafuriyay Ninkan oo dorraad soo galay dalka.
Ninkan oo Ciidamada Boolisku ku qabteen Dugsiga hoose/dhexe ee Sheekh Bashiir ee Magaalada Hargeysa hortiisa oo la sheegay in waqtigaa uu ku sugnaa, ayaa qabashadiisii ka dib waxa ku xoomay dadweyne aad u tiro badan iyo Ardaydii Dugsiga.
Dhinaca kale, qabashada Ninkan ayaa ku soo beegmay waqti Magaalada Hargeysa layla dhex marayo in uu soo baxay Bahal Dadka cunaya, kaas oo Nin uu cunay Ciidamada Boolisku ay sheegeen in uu xalay ku geeriyooday Xaafad ka mid ah Magaalada Hargeysa. Sidoo kalena, habeen hore nin aan ilaa hadda la aqoonsani uu Gabadh yar ku dal-dalooliyay Jidhkeeda, Dhiiggana ka jaqay duleedka Magaalada Hargeysa.
Guud ahaan Dadweynaha ku dhaqan Magaalada Hargeysa, ayaa waxa soo wajahday cabsi keentay in Habeenkii Fiidka hore aanay Dumarka iyo Caruurtu u bixin dibedda ama aanay adeegyada ka doonan Dukaamada.